BAAQ AY WADA JIR U SOO SAAREEN BEELAHA GERI KOOMBE iyo CABDI KOOMBE
Ku: IGAD & Hay'adaha caalamigi ah ee jooga shirka Kenya
Beelaha Geri Koombe iyo Cabdi Koombe oo la siman walaalahood Harti Koombe, waxa ay mar labaad halkan ku cadaynayaan sida ay uga soo horjeedaan qaabka ay IGAD ku wadaan shirka Soomaalida uga socda kenya iyo qaabka ay u qaybiyeen kuraasta baarlamaanka ee beesha Daarood.
Sida la wada ogsoon yahay, inkasta oo ay IGAD iska indha saabeyso, beelaha Geri Koombe iyo Cabdi Koobe wdegaanadooda waxaa kamid ah: Jubbada Hoose, Bari, Nugaal, Mudug, Bariga Kenya, Bariga Itoobiya iyo meelo kale oo kamid ah geyiga Soomaaliya.
Haddaba waxaan mar labaad halkan ku cadayneynaa in:
Qaabka ay IGAD ugu qoondaysay xildhibaanada beelaha Daarood in ay ahayd hab gebi ahaanba aan waafaqsanayn xaqiiqada, habkaas oo ah xaq duutin oo ka fog caddaalada.
Waxaana IGAD xusuusineynaa:
In beelaha Geri Koombe iyo Cabdi Koombe ay kamid yihiin beelaha ka qayb qaadanaya shirka Kenya, sidaas daraadeed in ay IGAD tix geliyaan dhambaalka aan u gudbiney oo ay markaas si siman beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu qaybiyaan, waa haddii ay rabaan nabada Soomaaliya, oo ay daacad ka tahay xal u raadinta khilaafaadka dadka Soomaaliyeed.
Waxaan IGAD ka sugeynaa jawaab degdeg ah.
QORAAL AY GERI KOOBE & CABDI KOOBE U DIREEN IGAD... GUJI [EGLISH]
Abdi Osman Maalim Sagal:
Nairobi, Kenya CABDI KOOMBE (JAMBEEL)
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 26, 2004
WARARKII AGOOSTO 25
� Bayaan kasoo baxay Beesha Tolomoge..
� Kulan taageero ah beesha Silcis Gargaarte...
� Dhaarinta Xildhibaanada sidee looga arkay Sudan..